भरतपुरकाे विकासमा ओलीकाे आँखा : काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु ! – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारभरतपुरकाे विकासमा ओलीकाे आँखा : काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु !
भरतपुरकाे विकासमा ओलीकाे आँखा : काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु !
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले यहाँको गौरवको आयोजना सिटी हल र पुल्चोक–गोन्द्राङ ६ लेन सडकको शिलान्यास काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न नमिल्ने बताएकी छन्। शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाकै सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख दाहालले महानगरसँग कुनै समन्वय नै नगरी, कुनै जानकारी नगराई स्थानीय तहको गौरवको आयोजनामा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नु राज्यको दुरुपयोग भएको बताइन्।
पत्रकार सम्मेलनमा भरतपुर २१ का वडाध्यक्ष चित्रसेन अधिकारीले स्थानीय स्वयत्त शासनलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले शिलान्यास गर्दै हिँड्न मिल्दैन, यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’ – लोकपाटिबाट साभार ।